Kukwanisa kubudisa, kugadzira uye kugadzira zvakawanda zve2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) nehutano hwehutsika pasi peCGMP
2-Chloro-5-methylpyrimidine 22536-61-4 product specifications
CAS no 22536-61-4
Kemikari zita 2-Chloro-5-methylpyrimidine
IUPAC zita 2-chloro-5-methylpyrimidine
Flashpoint (° C) 121.53
Nyaya yekubikira (° C) 23.18
Nhamba yakanyunguduka (° C) 89 kuna 92
Molecular formula C5H5CIN2
Kuwanda kwevakawanda pamhara 1.169 gramu pa mole mole pa 25 degrees centigrade
Molecular weight 128.559 g / mol
Monoisotopic mass 128.014 g / mol
Synonyms 2-chloro-5-methyl pyrimidine
2 anodzokorora nokuti 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4)
APICMO yakaratidza kukosha kwayo uye kuti inogona kuvimbwa kana iri pamusoro pekugadzira uye kugadzirwa kwemakemikari zvigadzirwa. Tine unyanzvi hunoshandiswa, zvishandiso, uye unyanzvi hunodiwa kuti hugadzire zvinhu zvepamusoro-soro, chimwe chazvo chiri 2-Chloro-5-methylpyrimidine 22536-61-4, kemikemikari yakanyatsogadzirwa kuti iite mitemo nemirairo yeCGMP uye hutano hwehutano.
Ichi chemikemikari inenge yakachena yellow crystalline powder pachitonho chemukati. Mucheka unooneka seasina-machena. Inogona kubudiswa ichitevera nzira dzakawanda, asi iyo inowanzogadziriswa kuburikidza nekuita kwe phosphorus oxychloride uye 3-methylpyridine 1-oxide. Iyi nzira inobatsira pakuwana chemakemikari se25% yemuiti. Zvisinei, nokuda kwezvibereko zvakakwirira, zvinogadziriswa zvinowanikwa asi nehupo hwehupenyu hwemitrogen ekamu uye inert organic solvent. Izvi zvinoshandiswa mukati mekushisa kwepakati pe -50 degrees kusvika ku50 degrees.
Iyo nzira inoramba ichichinja, uye zvinokwanisika kusvika kusvika ku 70% yemugove wakabva nenzira inoshandiswa. Nzira iyo inoshandiswa inobva pane huwandu hwekemikisi inoda kubudisa kana kuti munhu anoda sei kushandisa ikemikari.
Inonyanya kushandiswa se;
A pesticidal intermediate
Ichi chigadzirwa chave chakashandiswa mukugadzira michina yakafanana neonicotinoid mishonga, iyo inosanganisira basa rezvipembenene uye mukugadzirwa kweatetamirid, imidacloprid NTN32693, uye Nitenpyram, zvose izvo zvinoshandiswa mumapurazi uye mune zvekugara kuti zvibvise zvipembenene zvinoda kuparadza michero, zviyo kana miriwo.
2-Chloro-5-methylpyrimidine 22536-61-4 makemikari akaumbwa
2-Chloro-5-methylpyrimidine makemikari uye masimba
Iyo chemikisi inogadzikana zvishoma mumvura
22536-61-4 hydrogen bonding
Hydrogen bonding donor count 0
Icho chemikemikari ipfu-yakachena-yakachena. Iwe unodawo kuziva kuti hazvina kunaka.
2-Chloro-5-methylpyrimidine yakaumbwa nezvinhu
Kunotsanangurwa Bond Stereocenter Coun 0
Usingazivikanwi Atom Stereocenter Coun 0
Topological Polar Surface Area 25.8 A ^ 2
2-Chloro-5-methylpyrimidine nzira yomugwagwa
Chigadzirwa chacho chine maitiro ekutanga emigwagwa sezvinotevera;
2-Chloro-5-methylpyrimidine pkudzokera uye kunyura kwemiti
Ichi chemikemikari inowanzoshandiswa mukugadzirwa kwehupenyu
Inoshandiswa se pesticide iri pakati
Inoshandiswa mumapurazi emabhizimisi neokugara kwekuparadzwa kwezvipembenene zvinokuvadza
Njodzi dzinobatanidzwa ne2-Chloro-5-methylpyrimidine
Ichi chemikemikari chinogona kutungamirira kumeso kutsamwa
Inotungamirira kune kutsamwa kweganda, kuora, kuora uye kubwinya, uye kusuruvara
Icho chinokuvadza kumapfupa ekufema kana akangoerekana apinza
2-Chloro-5-methylpyrimidine kuchengetedza zviyero
Usambofa wakakanganwa kupfeka zvipfeko zvinodzivirira usati waita ichi chemikemikari. Izvi zvinosanganisira magirafu asingagoni, magirazi edziviriro, uye mask masikati. Izvi ndezvokuti uzvidzivirire pakuuya kusangana neganda rako, maziso, nekufungidzirwa kwechiitiko kana kuifungidzira.
1. 2-Chloro-5-methylpyrimidine engineering controls
Iva nechokwadi chokuti laboratori yako kana nzvimbo yekubasa yakanyatsochengetedzwa nekuchengetedzwa kwezviyero. Izvi zvinosanganisira moto wokudzimisa moto, mvura yokuchengetedza, vaperesi compressor, fume hoods, air cleaner uye matepi nemvura inoyerera. Uyewo, chengetedza kuti imba yacho yakanyatsonaka.
Dzimwe nguva unogona kungoerekana wabvumirana nekemikemikari. Mumamiriro ezvinhu akadai, izvi ndizvo zvingaita;
Apo inosangana nemaziso
Kurumidza kumhanyira kumapopu uye oshambidza maziso ako nemvura yakachena kwema 15 maminitsi. Kana iwe uine lensisi, ita nechokwadi kuti uvabvise pakutanga kuti zvive nyore kuchenesa.
Ichi chemikemikari inokuvadza zvikuru paganda uye inogona kutotungamirira kune kuora. Nenguva isipi inomhanyira kumvura uye ushambidze nzvimbo yakakanganiswa zvakakwana nemvura yakasviba uye isina srafu.
Mune imwe nyaya yekufungidzira kuitika
Unofanirwa kushambidza muromo wako usati watora hafu yemvura. Cherechedza kuti haufaniri kumbodzisa kurutsa. Uyewo, iva nechokwadi chekuona mushambadziri kuti uwedzere kuvimbiswa.
Munhu akakodzera anofanira kuendeswa kunzvimbo yakasununguka kana yakanaka. Kana munhu wacho ari kutarisana nematambudziko, edza uye upe oksijeni yakasviba musati wamumhanyira kuchipatara chiri pedyo chairo kuti uwane rubatsiro.
3. 2-Chloro-5-methylpyrimidine yekuchengetedza
22536-61-4 inozivikanwa kuva ikemikari yakagadzikana kana ikachengetwa pasi pemamiriro ezvinhu akanaka. Zvichengetedze pamusasa wekupisa. Usashandise aluminium kana galvanized container yekuchengetedza sezvo mabhii maviri anogona kugadzikana nekemikari inotungamirira kuputika. Iva nechokwadi chekuti midziyo yacho yakavharwa zvakasimba uye kuti hapana zviratidzo zvekudonha.
4. Zvinhu zvaunofanira kuita kana uchibata 22536-61-4
Dzivisa kugadzirisa mafikemu aya emakemikari, mhepo kana guruva
Iva nechokwadi chokuti hazvibatanidzi neganda rako nekupfeka mbatya dzinodzivirira
Iva nechokwadi chokuti uri kushanda kubva munzvimbo yakanaka
5. Zvinhu zvokuita mushure mekunge zvaitwa nekushanda ne2-Chloro-5-methylpyrimidine
Mushure mekunge wapera, iva nechokwadi chekutora matanho anotevera;
Tanga nekucherechedza utsanana hwako. Shamba maoko ako usati washamba
Shamba zvose zvipfeko zvawaive nazvo paunenge uchishanda pamwe chete nechigadzirwa
Bvisa chero zvimedu zvisina chinhu uye uchengetedze kutevera mitemo yako yepamunharaunda uye yepamutemo kana uchitadza
Iva nechokwadi chokuti uchengetedze chigadzirwa chakasara maererano nemitemo
Kana zviitiko zvezviitiko mubazi, hezvino izvo zvingaita.
Iwe unogona kushandisa kabhoni IV) oksidi, yakadzima moto dzemadzimidzi dzinodzima moto, zvinodzimisa doro zvisina kumira kana polymer mutezo. Edza uye udzike pamabhazi ekudzivirira moto uye mafema ekufema kuitira kuti uwedzere kuchengeteka.
Shandisai zvinhu zvakanyanyisa kuti uwedzere kupera usati warasa muchitsime. Shandisa compressor yemhepo kuti uderedze mhepo yakakomba nzvimbo yakakanganiswa usati washandisa yakawanda yemvura kuti uchenese nzvimbo yacho zvakakwana.
7. 22536-61-4 yakasimba
Ichi chigadzirwa chakasimbiswa, kunze kwekuti chinoshandiswa uye chichengetedzwa pasi pemhepo yakakodzera uye yekutonhora mamiriro.
8. 2-Chloro-5-methylpyrimidine kuparadzwa kwemarara
Iwe unofanirwa kubata chigadzirwa ichi sechinhu chakasvibiswa, uye iwe unofanirwa, iwe, unofanira kuchirasa sezvazviri pamunharaunda, emagetsi uye kumarudzi ose emitemo yekurasa tsvina.
9. 2-Chloro-5-methylpyrimidine yokutumira mashoko
2-chloro-5-methylpyridimine yakasimba uye haina ngozi. Izvo zvinogona, saka, zvinotakurwa zvinyararire nemhepo kana gungwa. Icho chemikemikari inonyanya kushandiswa ne carbon dioxides, hydrogen oxides, uye nitrogen oxides. Izvozvi, saka, zvinokurudzirwa kusarudza nzira yekufambisa iyo isingaisviki kune imwe yezvikamu izvi.
Iva nechokwadi chekucherechedza mitemo yemunharaunda, yezvematongerwo enyika uye yepasi rose pamatanho ose ekugadzirisa chigadzirwa ichi.
Nyanzvi dzinogadzira iyo makemikari. Vane technician vedu vane ruzivo rwakawanda mumakemikari synthesis, chromatography, masayenzi yezvinhu, uye kuongorora kwezvinhu.
2-Chloro-5-methylpyrimidine kuronga uye mutengo
Ichi chemikemikari inoshandiswa pakutsvakurudza, kushandiswa uye kukamikarikemikari. Kana ukaronga pakushandisa kemikemikari chero ipi zvayo yezvinangwa zvinotaurwa, ivai vakasununguka kuita mirairo kubva kwatiri.
National Centre For Biotechnology Information, US. National Library Of Medicine, PubChem, 2-Chloro-5-methylpyrimidine Zvikamu 1-10
DJ Brown; uye T Lee. Pyrimidine reactions. XVI. Rearrangement yemafuta yechinzvimbo che 2- uye 4-alkoxypyrimidines. Australian Journal of Chemistry.196821 (1), 243 - 255.
Desmond J Brown. The chemistry of Heterocyclic Compounds, peji 4-5.
Yakanakisisa 2-Chloro-5-methylpyrimidine uye basa randakave narina, Nice experience